Peter M. (kubva munin'ina uyu akatendeka kuna Jeroen Pauw) akasungwa zvakare: Martin Vrijland
Peter M. (kubva munin'ina uyu akatendeka kuna Jeroen Pauw) akasungwa zvakare
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 6 June 2019	• 3 Comments
Iwe unorega mukadzi ane unhu hunodiwa hunoita 10 maminitsi Jeroen Anowedzera patafura uye iyo yose yeNetherlands inogutsikana kuti Peter M. nekuda kwekushaiwa oksijeni pakuberekwa kwave kwakaoma zvikuru zvokuti anoda kuita zvose kuna amai vake pasina mishonga. Asi hanzvadzi yangu inoshanyira Petro inenge vhiki imwe neimwe, nokuti hapana chimwe chinhu chinoputika muukama hwake naPetro shure kwezvinhu zvose izvo zvinotyisa kuMama. Hainzwi rinonzwisisika kwauri here? Zvakanaka, kana zvasvika pakuisa mitemo mitsva yausingazombogamuchiri kunze kweizvi zvose (zvichida) kuita. Petro M. naizvozvo maererano nevanhau vakamira zvakare (izvo zvinoita kuti nyaya yacho iwedzere kuvimbika).
Ngatitii mukadzi uyu ne "mukoma wake" akawana pfuma yemari yekuita kuti ape rubatsiro kumukati wemapurisa ane simba wemutemo wehurumende, saka izvo hazvisi kungokurumidza kuwana Judhasi mari, asi zvino muDutchman aidawo kuita izvozvo. .
Hama Peter haafaniri kuvapo, nokuti zvifananidzo nemavhidhiyo zvinogona kungovakirwa pahanzvadzi uye zvakasikwa kuburikidza nekudzikisa software. Zvisinei, teknolojia inoenda kusvika kure zvokuti kunyange hanzvadzi yaPetro inogona kunge isingazivikanwi zvachose kune dzimwe nyika dzeNetherlands, nokuti chiso chake chinogonawo kuitika munguva chaiyo patafura yaJeroren Pauw kuburikidza nekutarisana kwemaziso. Iko TV saka iwe hausati wava kuziva zvaunoona (sezvazvatsanangurwa mukati ichi chinyorwa). Kubva pamaminetsi e19 mu Peacock kuparadzirwa Nhamba yepamusoro inoratidzika kunze kwekutarisa kana kusvibisa kuti vane mhando ipi yepurogiramu mune zvidzidzo ipapo kuitira kuti munhu aonekwe akwegura, somuenzaniso. Panguva iyoyo inenge iri mutsva wehupfumi hwehurumende uye Jeroen anokurumidza kuuya nemifananidzo yeimwe tafura yevaeni, iyo inoratidza kuti inotarisa sei kumativi ehurumende yezera remakore.
TV studios, John de Mol uye ANP yake vane software yose yaunogona kufungidzira uye nei vasingaiti kuti ibenze vanhu? Iwe unofunga kuti izvozvo hazvina kunaka here? Zvadaro nyatsoteerera kuti zviyero zvipi zvichange zvichisimudzwa munguva inouya. Kuti kupukunyuka kwaPeter M. kuchaita kuti hurumende isarudze uye kuti mhuri inobva ikozvino inobvunzurudzwa muchisarudzo chekuvhara mumwe munhu, yakanga yakavanzwa mukurasikirwa uku. Uye zvechokwadi zvaifanira kugadzirisa nyaya yaAnn Faber zvakare. Mukuwedzera, zvakajeka kuti kubva ikozvino kumakiriniki zvinongoda kuchinjwa kuva majeri. Verenga iwe pano zvakare kuti mhando dzakasiyana-siyana dzekuponda (zvinotarisirwa kuita zvepfungwa) dzinofanirwa kutungamira kune hutsva hutsva hwekuchinja uye izvo chaizvoizvo.
Zvose zviitiko zvakanyanya izvo zvino zvichinyorwa nevezvinyorwa zvinowedzera pasi uye imwe yeavo mabhota maviri ndeyokuti isu tinofanira kunge tiri vatengesi vakawanda kune ani zvake anonzi haana kuwanikwa (via Sherlock app). Kuti idzi dzinogonawo kuva vaduku vari kuyaruka vari kushanda pairi hurumende yakasimba vakawanda vanoedza kutiza kubva kumapoka ekuchengetedza vechidiki uye kuti inogona kuvawo vanhu avo munguva yemberi iri pedyo vachazongopera sevanoramba muGulag, vazhinji havazovhiringidzi. Kuvengana naizvozvo kunova rudzi rwePokémon tsvina yemutambo. Vanhu vacho vane pfungwa dzehupfungwa nemitambo yemavhidhiyo iyo inopa pfungwa yokuti yose inoshandisa bhizimisi yakanaka. Kuchengeta iyo purogiramu inopawo nyika nguva yakazara yakakodzera yekushandisa kamera yako, maikorofoni uye nzvimbo yepahara, kuitira kuti iwewo uchatorwa zviri pamutemo, asi izvozvo zvishoma.
Panguva ino, munhu wese anogovera zvangu nyaya pa Facebook acharwiswa nemapumburu ehurumende anonzi shamwari, ruzivo, nhengo yemhuri ye protagonist, kuodza mwoyo avo vanogovera zvinyorwa uye vanoramba vachiita basa. Pamusoro pezviitiko zvehuwandu hwezvemagariro evanhu zvinowanzoitwa Inoffizieller Mitarbeiter kana iwe unotaura neAIVD nhengo ari kuvanda shure kwekuwedzera maitiro (akabatanidzwa kune mamwe akawedzera ma profiles, kuitira kuti purogiramu yakadaro iite ine yekutendwa yehutano). Ukuru hwekurwisana uku kunotyisa zvokuti vanhu vazhinji havachazovhundutsira kugovera kana senyaya. Usaita munda mukati!
Tags: ari, madder, Featured, missed, akawanikwa, Jeroen, kliniki, M., murwere, Peacock, Peter, psychiatric, shure, kuparadzirwa, hanzvadzi
7 June 2019 pa 08: 47
Ndinogona here kunditaurira kuti nei hanzvadzi inonzi inonzi Peter M. inofarira TV? Kazhinji vanhu vose vangave vasingadi kuuya paTV kana mumwe wemhuri akabvunzwa anochengetedza zvakaderera. Pane munhu angandiudza kuti nei Petro M. uyo ane ngozi uye asingakwanisi kushanda pasina kusunungura mishonga? Zita rechiremba rinomubata? Akambove ari paTV neHurumende Pauw kuti atsanangure here? Chiremba akadaro haana kubviswa kana kurairwa chirango here?
Chii chakaipa, nyika yeunyengeri ichi? Sarudza kure nevarume kubva script asap.
7 June 2019 pa 09: 03
Ichokwadi kuti iyo nyaya isingatenderwi. Mumwe munhu asingakwanisi kushanda asina mushonga uyo anopiwa muedzo achibva aenda zvakare kuyanana.
Icho hachisi chaicho chinonzwisisika zvachose.
Oo hongu uye zvino nyaya iyoyo ye "bhomba reatomu" .. izvo zvaiva iye pachake.
Vanouya nehurukuro inowedzera idiotic uye vanhu vazhinji vanongopinda mazviri nokuti mumwe munhu ari kutaura nyaya kuti asvike nechiso Jeroen Pauw uye vose vateresi vashanyi vadzidzisi venhema vanotsigira nyaya yacho.
7 June 2019 pa 10: 22
Chinhu chinoshamisa, chisingatendi. Handizivi zvakajeka kuti Petro M. akagara kwenguva yakareba zvakadini uye achida kupona. Kana kuti vakanga vatomuratidza here nzira yekuenda nayo? Aidya nekunwa chii? Kwete nzara, nyota, kugadzirisa? Izvi zvakabhadharwa here? Akanga ane zvidzitiro zvechidzitiro here? Sei? Etc.
« Kunyatsotsvaka kutsvaga kwehupenyu hwePBS mushandi kubva kuDen Kolder
Iwe unogona kuunza shanduko uye zvisarudzo zvako zvakashata! »
Total Visits: 14.486.977